CAN-2019: Masar oo ka careysiisay, dib-u-soo-galayaashii Morocco iyo Senegal - TELES RELAY
ACCUEIL » International »CAN-2019: Masar ayaa ka badbaaday, dib u soo noqoshada Morocco iyo Senegal
Morocco-Ivory Coast iyo Senegal-Algeria ayaa noqon doona naxdinta wareegga koowaad of CAN-2019, halka Masar, oo martigelineysa, ay ciyaari doonto furitaanka furitaanka. Zimbabwe, 21 June, sida lagu sheegay isku aadka Jimcaha.
In qaabka Silanyo fircooniga ah Giza, ka Warkii qaaradda mas'uul ka ah barbaro Yaya Touré El Hadji Diouf, Ahmed Hassan iyo Mustapha Hadji ma bixiyaan "koox dhimashada" sababtoo ah kooxaha format 24. Laakiin ugu yaraan laba shoog ayaa laga yaabaa inay ku soo baxaan wareegga 1er tartanka oo socon doona ilaa July 19.
Morocco ayaa ka heli ka wareega group-yada Ivory Coast ee ah "remake" ee edition 2017, halka Senegal, kuwaas oo ku riyoonaya inuu guushoodii ugu horeysay ee 17 sano ka dib 2002 nasiib darro final, gudbo Waddooyinkiisa Algeria marxaladdaan tartanka seddexaad ee isku xiga (2015, 2017, 2019).
At madaxa "Atlas Lions", Herve Renard Faransiis ah isku dayi doonaa inaan ku guuleysano 3e ADC leh xulashada kala duwan 3e, ka dib markii uu guul la Zambia (2012) ... iyo Ivory Coast (2015). Iskudhin iyo aargoosi in la raaco!
Mastodon oo kubadda cagta Afrika ah kula ciyaari doona 7 CAN, oo uu ku jiro seddex gurigiisa, Masar ayaa sidoo kale ka hor imaan doonta DR Congo iyo Uganda Group A.
Inkastoo ciyaartoyda Mohamed Salah, kooxda kaalinta labaad ka soo baxday koobkii ugu dambeeyay, ayaa barbaro daa'in ah, doorashooyin kale oo ka qeyb galay World-2018 ee Ruushka sida Tunisia ama Nigeria, ayaa sidoo kale inta badan ka badbaaday.
- Marka hore Madagascar, Burundi iyo Mauritania -
The "Super Eagles", kuwaas oo laga helay tartanka qaaradda ka dib lix ka mid ah maqan, la ciyaari doona Guinea, Madagascar, iyo Burundi, labada kooxood kuwaas oo ka qayb qaadan doonaan ay CAN ugu horeysay, halka "Carthage Eagles" ka Mali dhaxlay, Mauritania, iyo Angola.
Cameroon, oo haysta horyaalka, ayaa ka soo horjeeda Ghana, Benin, iyo Guinea-Bissau ee Group F.
Tournament Continental ayaa martigelin doonta kooxdii ugu horeysay ee 24 xagaaga (21 June-19 July), halkii ay ka heli lahaayeen kooxo 16 qaabkii hore. Sidaasi darteed, labada kooxood ee ugu sareeya kooxaha iyo seddexda seddaxaad ee ugu sareysa ayaa u soo bixi doona wareega knockout.
Inkastoo qaab cusub, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri doona kuwa Maqan buu caan at this edition XXL sida Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, Togo Emmanuel Adebayor iyo Claude Le Roy, ama Burkina Faso, finalka ee 2013 iyo 3e 2017.
Masar ayaa bishii Janaayo loo doortay inuu ku guuleysto Koobka Aduunka ee CAF si uu u baddalo Cameroon ogeysiis gaaban, kaasoo ahaa ururkii la joojiyay sababo la xiriira dib u dhac ku yimid shaqada.
Kulamadan ayaa lagu qaban doonaa lix garoon oo ay ku yaalaan, kuwaas oo saddex ka mid ah ay ku jiraan Qaahira (Garoonka Diyaaradaha ee Qaahira, Garoonka Diyaaradaha ee Al-Salam, Stadium Stadium). Kuwa kale ee la doortay waxay yihiin kuwa ka mid ah Alexandria, Suez iyo Ismaaciiliya.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/13/can-2019-legypte-pargne-retrouvailles-venir-pour-le-maroc-et-le-sngal/
Gabon wuxuu riixayaa xadka da 'yar ee xannibaadda xirfadlayaasha ah ka dib dibad baxyo